Hnin Wai Lwin၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Hnin Wai Lwin's Apps
Hnin Wai Lwin's Likes
Hnin Wai Lwin's ၏မိတ်ဆွေများ
Hnin Wai Lwin's Groups
Red Ribbon From A BuddhismworldAdmin
Hnin Wai Lwin၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
phyuthi သည်Hnin Wai Lwinကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Hnin Wai Lwin shared မောင်မြင့်'s blog post on Facebook
နာဂစ့်် မိဘမဲ့ကလေးငယ် များ စောင့်ရှောက်မူ (အောင်ဇေယျာမင်းကျောင်းတိုက်)
Hnin Wai Lwin သည် စိုးလေး's၏ 'မဟာမြတ်မုနိဂုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးသမိုင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Hnin Wai Lwin သည် မောင်မြင့်'s၏ 'အယူမှားရင် ငရဲကျမယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Hnin Wai Lwin gaveagift to thiri thandar lwin
Hnin Wai Lwin liked thiri thandar lwin's profile
Hnin Wai Lwin သည်thiri thandar lwinကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"hey...my lovely sis, I'm glad to see u on this site. U can get much knowledge about our religion."
Hnin Wai Lwin သည် မောင်မြင့်'s၏ 'သေသူကို သရဏဂုံတင်ခြင်း ပြဿနာ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Hnin Wai Lwin replied to A BuddhismworldAdmin's discussion 'ဆိုက်ထဲမှာ လိုအပ်ချက်များ'
"မင်္ဂလာပါ.. ဆိုက်မှာ အရောင်တွေက အရမ်းမျက်စိစူးပါတယ်... ကျမက ဆွေးနွေးချက်တွေတော့လုပ်လေ့မရှိပါဘူး.. အချိန်ရသရွေ့တော့ တင်သမျှ post များကိုဖတ်ပါတယ်... မသိသေးတာတွေ၊ သိပြီးသားတွေပို ပြည့်စုံအောင် သိရတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် တနေ့တည်း တပုဒ် ၊…"
Hnin Wai Lwin သည် မောင်မြင့်'s၏ 'တာဝတိံသာနတ်ပြည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် သိကြားမင်းအကြောင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Hnin Wai Lwin replied to ပလုံတုံး's discussion 'အဖန် ငါး ရာငါး ကမ္ဘာ'
Hnin Wai Lwin replied to နီစံ (အနီ)'s discussion 'လောကုတ္တရာ စာမေးပွဲ ကဏ္ဍ'
"ကိုဇော်ထက်မောင်ရဲ့ အဖြေက(၃)ခုမှန်ပါတယ်။ အဖြေမှန်နှင့်လည်း နီးစပ်ပါတယ်။ အဖြေမှန်ကို တိုက်ရိုက်ပဲပြောပေးပါမယ် (၁)သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ (၂)ပစ္စေကဗုဒ္ဓ (၃)သစ္စာဗုဒ္ဓ (၄)သုတဗုဒ္ဓ"
9:45pm အချိန်မေ 21, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:37pm အချိန်မေ 24, 2012, တွင် အရှင်ဝိမလဝံသ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိအကျိုး သူတစ်ပါးအကျိုး သာသနာ့အကျိုးကိုဆထက်တိုးပြီး ဆောင်ရွတ်နိုင်ပါစေ။
ဒကာမ ( Hmin Wai Lwin ) ဦးဇင်းလာလည်သွားပါတယ်။ နာဂစ်မိဘမဲ့ ကလေးများအတွက်လှူဒါန်းတဲ့ အခါဦးဇင်းလည်းပါဝင်ချင်ပါတယ်။ (11- 6- 2012) ဆိုရင်ဦးဇင်းမြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ပါပြီ။ အဲဒီအခါ ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်။ ဒကာမပေးထားတဲ့ကွန်မင့်လေးကို အလွန်လေးစားမိသောကြောင့် ယခုလို ဒကာမရဲ့ စာမျက်နှာကို ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမည်ဆိုတာကို သိချင်ပါသည်။ လိုရမယ်ရ ဦးဇင်းအကောင့် ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
9:06pm အချိန်မေ 22, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:47pm အချိန်မေ 21, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
At 4:43pm on မေ 21, 2012, A BuddhismworldAdmin gave Hnin Wai Lwinagift…
4:26pm အချိန်မေ 21, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:13pm အချိန်မေ 20, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:58pm အချိန်မေ 20, 2012, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:58pm အချိန်မေ 20, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ လို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်လေးထဲမှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ တရားတော်များကို လွတ်လပ်စွာ နာယူ၊ မှတ်သား၊ လေ့လာ၊ မေးမြန်း၊ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာ နောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ တရားတော်များကို ကိုယ်တိုင် သိမြင် ခံစားနိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။